Judith Kerr, Munyori weHitler paakaba Pink Rabbit, Anofa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Vechidiki Mabhuku, Noticias
Mufananidzo naJudith Kerr: (c) Christoph Rieger.
Yaiva mazuva mashoma apfuura uye nhau dzakandishungurudza. Judith Kerr akashaya, munyori we Hitler paakaba Pink Rabbit, imwe yenyaya idzodzo mareferenzi ezvinyorwa zvevana nevechidiki uye zvichibva pahupenyu hwako ruzivo. Yakatumirwa mukati 1971Vakandipa iwo muma80s uye ini ndichiri kuchengeta iyo manzwiro kubva pandakaiverenga. Kerr Ini ndaive ndiine makore 95 uye iye anosiya shure kwehupenyu sekureba kunge hwakagwinya mumabasa kune vadiki vaverengi. Ichi chi kudzokorora.
2 Mitambo inozivikanwa
2.1 Ingwe yakauya kuzonwa tii
2.2 Hitler paakaba Pink Rabbit
2.3 Mog, iyo katsi isingazive
Akave ari mumwe wevanyori veBritain uye vanyori mabhuku anodiwa evana mabhuku kuUK. Asi Judith Kerr akaberekerwa muBerlin muna 1923. NaHitler paakatanga kutonga, Kerr ivo vaifanira kutiza Germany mukutanga kwema30. Mamiriro echiJuda ababa vavo, munyori, mutsoropodzi wemitambo uye munyori wenhau Alfred Kerr, uye chimiro chavo chakapesana nehutongi chakavaisa pachena uye aive mupurisa akavayambira kuti vaende.
Vakatanga kumhara pamusoro Switzerland, ndokuzoenda kuParis ndokuzopedzisira ndaenda ku London. Ikoko, haana kukwanisa kudzidza kuCambridge University sezvaaizoda, saka akafunga kuita kutaipa makosi uye zvakaitikawo kubatsira varwi vakakuvara yeHondo Yenyika Yechipiri mu Red Cross. ndinotora kudhirowa makirasi ndokuzowana a beca yeChikoro cheArt. Paakaroora akasiya zvese uye aive yakatsaurirwa kumba uye mhuri.
Yakanga iri yakazotevera gare gare kuti Judith Kerr akagadzira nyaya yevana vake vaviri yaakatumidza Ingwe yakauya kuzonwa tii. Uye yaive yake mabhuku ekutanga muna 1968. Kubva ipapo, basa rake rakasimuka ndokuenderera mberi kweimwe hafu yezana ramakore.
En 2012 vakamupa iyo Kurongeka kweMambo (yakapihwa naMambokadzi Elizabeth II) mukuremekedza mabasa ake kuna zvinyorwa zvevana uye dzidzo nezvake Kuurayiwa kwevaJudha. Uye mazuva mashoma apfuura akapemberera kusarudzwa kwake se muenzanisi wegore pamitambo British Bhuku Mipiro.
Ingwe yakauya kuzonwa tii
Pakati pezvakawanda yakakurumbira, yakakosheswa uye yakatengeswa yemakumi emakore apfuura munyika zhinji, bhuku iri ratove a yechinyakare yechinyakare yezvizvarwa zvinoverengeka zvevaverengi. Iyo nyaya ye ingwe ine makaro kwazvo inokanganisa tii uye tudyo twemusikana naamai vake, asi inoguma ichidya pari yese uye nekunwa kunyangwe mvura yemapaipi isati yanyangarika.
Hitler paakaba Pink Rabbit
Pamwe basa rake chinonyanya kuzivikanwa nekuzivikanwa, uye inoputira nemanzwiro uye nehanya. Kusvika kwaHitler Kusimba kuchachinja zvakanyanya hupenyu hwe Anna nemhuri yake. Baba vake vanofanirwa kuenda kuutapwa kuSwitzerland uye Anna, amai vake nemukoma wake vanomutevera mazuva mashoma gare gare. Anna anosiya tsuro yake yepingi, nekuti haikwani musutukesi uye ndokusarudza kusarudza imwe toyi kunyangwe gare gare anozoirova. Izvo zvichasara zvakare zvichave hudiki hwake.
Iri zita rekutanga mune trilogy. Vakatevera Hondo yeBritain, chikamu chechipiri chenyaya, umo mukadzi wechidiki Anna anogara muLondon yeBlitz Uye iye zvino ave achiri kuyaruka uyo, kumatambudziko ezera rake, anofanira kuwedzera izvo zvekugara muguta muhondo uye matambudziko emari evabereki vake. Uye chetatu, Munhu Mudiki Ari Kure
, uyo asina kusvika pano uye kwatinotova nemumwe Ana mukuru uyo anoenda kuGerman mushure mehondo mushure mekuedza kuzviuraya kwamai vake.
Mog, iyo katsi isingazive
Kubva pane zvaakasika izvozvi, iyo kitten Mog inogara na mhuri yekwa thomas uyo anomuchengeta uye anomuda kwazvo, kunyangwe aine dambudziko rake: kanganwa zvese. Asi rimwe zuva kukanganisa kwake kuchave kwakakosha kwazvo, nekuti paakabuda kuenda kubindu kunoyedza kutiza, aizivawakasungwa. Paunenge uchida kuenda kumba, tora mukana chimiro chemurume pakati pousiku mukicheni uye mog meows isingamiri kutora pfungwa dzako. Asi zvazvinowana murume iyeye, mbavha, kubatwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Judith Kerr, munyori we Apo Hitler Akabira Pink Rabbit, anofa
Jules Bonnot, Chauffeur waConan Doyle, Aive Mumwe Wematsotsi Anonyanya Kutambudzwa MuFrance